🥇 ▷ OnePlus 7 Pro - Kor u qaad Android 10 Maalin lamid ah Pixel! ✅
OnePlus 7 Pro – Kor u qaad Android 10 Maalin lamid ah Pixel!
OnePlus 7 Pro – Kor u qaad Android 10 Maalin lamid ah Pixel! – Pixel-ka casriga ah waxaa had iyo jeer loo arkaa inay yihiin khibradda ugu wanaagsan ee dunida ka jirta. Fikradda ayaa ahayd inay lahaato nidaam hawlgal oo nadiif ah, dabcan, had iyo jeer lasocda, iyada oo nooca ugu dambeeyay ee Android isla maalintaas lagu sii daayay suuqa.
Taasi waxay tiri, Google ayaa horaantii usbuucan ku dhawaaqay in Android Q ugu dambeyntii loogu yeeri doono kaliya Android 10. Taasna waxay gaari doontaa taleefannada casriga ah ee Pixel ee la jaan qaada bisha Sebtember 3deeda!
Marka… Maxaa dhacaya haddii uu jiray soo saare kale oo awood u leh soosaarida nooca ugu dambeeya ee Android 10, isla maalintaas ay ku dhufan doonto Google Pixel?
Waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn, laakiin maahan! OnePlus xitaa waxay qorsheyneysaa inay siidaarto noockeeda u gaarka ah Android 10, oo lagu magacaabo Oxygen OS, siideynti ugu dambeysay. OP 7 Pro! Tani, isla maalinta ay taleefannada casriga ee Google ka helaan.
Ugudambeyn, wax cajiib ah! Adduunyo aan badiyaa ka heli karno taleefanno gacmeed qaali ah oo ay si fudud u dayaceen soo-saareyaashu. Haddaba aqri waxa ay taageerada OnePlus ka leedahay xaaladda:
Sidaa darteed, sida aad ku arki karto sawirka kore, taageerada OnePlus lafteedu waxay xaqiijineysaa in qorshaha hada socda uu yahay in la sii daayo cusbooneysiinta 3-da bisha Sebtembar 3. Si kastaba ha noqotee, wax aan wali la xaqiijin.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la siinayo kalsoonidaas oo dhan… Xitaa haddii maalinta 3-aad siidaynta la sii daayo, cusboonaysiinta waa inaysan noqonin daah dambe.
Waxaas oo dhami waxay samaynayaan macno badan, gaar ahaan marka la filayo in shirkaddu bilawdo barnaamijkeeda cusub ee OnePlus 7T Pro qeybta labaad ee sanadka.
Dabcan, waa inay suuqa ku dhufataa nooca ugu dambeeya ee Google OS! Iyo sida 7T Pro ma aha inay u ekaato mid ka duwan kan hadda jira 7 Pro. Waxay u badan tahay in soo-saaraha yar ee Shiinaha uu xannibay dhamaanba qoloftiihii uu ku sameynayay cusbooneysiinta.
Ka sokow, maxay kula tahay waxaas oo dhan? Nala wadaag aragtidaada fikradaha hoose.